Android One: Siduu ku dhashay iyo sida uu u kobcay | Androidsis
Eder Ferreno | | Tababarada, Noocyada Android
Android One wuxuu noqday wax iska caadi ah suuqa maanta. Wuxuu dhashay afar sano ka hor, qaabkan qalliinka noocaani wuxuu leeyahay horumar xiiso leh. Maaddaama qorshayaashii ugu horreeyay ee shirkaddu aad u kala duwanaayeen. Laakiin, sannadihii la soo dhaafay waxaa soo martay isbeddello ka dhigay noockan.
Nooc leh taageerada macaamiisha. Sidee ayuu Android One u noqday waxa uu yahay maanta? Waan kula hadlaynaa ku saabsan horumar this soo socda. Si aad wax badan uga sii ogaato noocaan ah nidaamka qalliinka, kaasoo suuq badan ku kasbaday.
1 Asalka Android One
2 2017 iyo 2018: Isbedelada iyo guusha Android One
Asalka Android One
Markii ay Android qaadaysay tillaabooyinkeedii ugu horreeyay suuqa, Google waxay ku qasbanayd inay kala xaajooto soosaarayaasha iyo shirkadaha ka shaqeeya. Tan iyo markii ay ku bilaabeen faa'iido darrada, waxaa lagu qasbay inay sameeyaan tanaasullo qaar. Marka waxay u oggolaadeen soo-saareyaasha inay abuuraan lakabyo u gaar ah, marka lagu daro rakibidda boobka.
Tani waxay ahayd wax ka hor istaagay taleefannadu inay u shaqeeyaan sidii Google doonayay. Sidaas, wuxuu qaatay go'aanka ah inuu abuuro Android One sanadkii 2014. Nooc ka mid ah nidaamka loogu talagalay telefoonada miisaaniyadaha yar, ee suuqyada soo koraya, wax waa Android Go hadda. Tani waxay ahayd wax natiijo wax ku ool ah ku yeeshay Shiinaha.
Laakiin sanadkii 2015 shirkaddu waxay go'aansatay inay bedesho nidaamka noocyadan hawlgalka. Markaa sannadkan, waxay u oggolaadeen shirkaddii ugu horreysay ee reer galbeed ah inay soo saarto oo ay soo saarto taleefanka Android One. Shirkadda Isbaanishka ee BQ ayaa ugu horreysay isagoo leh sharaf. Qeexitaanka taleefanka ayaa ahaa mid adag, laakiin wuxuu lahaa faa'iidada helitaanka cusbooneysiinta si dhakhso leh.
Laakiin ma dhihi kartid in taleefankan, Aquaris A4.5, uu isna guuleystay. Wax saamayn badan ku yeeshay shirkadda. Maxaa yeelay sanadka 2016 wuxuu ahaa sanad kaas oo Android One wax dhib ah kuma qabin joogitaanka suuqa. Xaqiiqdii, kaliya laba moodal ayaa loo sii daayay dukaamada leh qaabkan.
2017 iyo 2018: Isbedelada iyo guusha Android One
2017 wuxuu ahaa sanad isbedel weyn lagu sameeyay Android One. Sannadkan oo dhan, kaliya seddex taleefan oo wata nooca noocaan ah nidaamka shaqada ayaa yimid suuqa. Laakiin, mid ka mid ah moodelladan ayaa mas'uul ka ahaa isbeddelada iyo xawaaraha ay qaybtan ka heshay suuqa. Telefoonadee ayaan ka hadlaynaa? Kani waa Xiaomi Mi A1.
Marka lagu daro inay tahay talaabo muhiim u ah soo saaraha Shiinaha, Waxay sidoo kale la tagtay isbeddelo muhiim ah oo ku saabsan Android One. Waxay horeyba nooga tagtay tilmaamo waxa noocaan ah nidaamka qalliinka uu doonayo inuu noqdo. Tan iyo markii ay ka tagayeen taleefannada dhamaadka-hooseeya, si ay ugu sharxaan moodooyinka wanaagsan, kuwa dhexe iyo kuwa sare.
Qaar ka mid ah astaamaha muhiimka ah ayaa sidoo kale la soo bandhigay. Telefoonada ugu sareeya, laakiin heerarka Google. Tani waxay ahayd hadda wixii ka dambeeya furaha Android One. waxaan helnaa nidaam nadiif ah, oo aan lahayn lakab shakhsiyeed ama bloatware, oo leh barnaamijyo Google la xushay. Intaa waxaa dheer, muuqaalka cusbooneysiinta waa la hagaajiyay. Maaddaama ay jiraan laba sano oo cusbooneysiin nidaam ah iyo saddex sano oo dheellitir ammaan ah.
Haddii taleefankan la bilaabay 2017, wuxuu ahaa dhiirrigelin weyn oo loogu talagalay Android One, 2018 waxay ahayd sanadkii ay iskeed isu taagtay suuqa. Sidoo kale sanad guushu ka buuxdo. Tan iyo markii aan helno tiro badan oo moodallo leh noocaan maanta ah. Xaqiiqdii, noocyada sida Nokia waxay u isticmaalaan dhammaan taleefannadooda horayba. Guud ahaan, 15 telefoonno cusub ayaa soo gaadhay suuqa kuwaas oo adeegsanaya noocyadan nidaamka qalliinka ah.
Qaar ka mid ah taleefannada laga bilaabay dukaamada illaa 2018 oo dhan oo ay la socdeen Android One sida nidaamka qalliinka ay yihiin:
LG G7 Mid
Shaki la'aan, isbeddelka ay soo martay ayaa ugu xiiso badnaa. Marka waa inaan aragnaa waxa ay nagaga tagayaan 2019, sanad ay tahay in la xoojiyo kobaca soo maray sanadka 2018.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Mid ka mid ah Android: Asalka iyo isbeddelka noocaan ah nidaamka qalliinka
Habka mugdiga ah ee Android: Asalka iyo faa'iidooyinka